မေ 2018 | တစ်ဦးကရထား Save
လ: မေ 2018
နေအိမ် > မေ 2018
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဒါဟာဆွစ်ဇာလန်အများဆုံးက၎င်း၏နှင်းဖုံးထိပ်နှင့်အရသာချောကလက်များအတွက်လူသိများကြောင်းဆိုပါတယ်နိုင်, ဒါပေမယ့်မျက်စိနှင့်တွေ့ဆုံထက်အဆင်းလှသောအစ်မတိုင်းပြည်အတွက်ဤမျှလောက်ပိုပြီးလည်းမရှိ. ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမီးရထားခရီးများလှပကျေးလက်ပျော်မွေ့ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း….
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ရထားပေါ်တွင်စားစရာအကောင်းဆုံးအစားအစာများအမှန်တကယ်ယနေ့ခေတ်အလွန်အရသာရှိပါတယ်. များစွာသောရထား 5-ကြယ်ပွင့်နေရာထိုင်ခင်းများနှင့်ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားအစားအစာပူဇော်သောကြောင့်. ဤလောက၏နာမည်ကြီးစားဖိုမှူးများကဖန်ဆင်းအစားအစာပါဝင်သည်. You are probably used to reading about amazing food in train stations or beautiful scenery you…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ အီတလီနိုင်ငံအချို့သောအံ့သြဖွယ်ရထားခရီးစဉ်များရှိပါတယ်. ဒါဟာတိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံးလှပသောရထားနှင့်လက်ရာမြောက်သောဘူတာ၏နံပါတ်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ရှိရာပထမဦးဆုံးမီးရထားခရီးစဉ်ကိုအစဉ်အဆက်အီတလီနိုင်ငံခဲ့? This article was written to educate about Train Travel and was made by Save A…